Koongareyska Maraykanka oo Bilada ugu Sareysa Dahabka oo ay Bixiyaan Gudoonsiisay Haweeneyda Mucaaradka Dalka Burma Aung San Suu Kyi.(Hadhwanaagnews) Thursday, September 20, 2012 New York-(HWN)- Hogaamiyaha kooxda mucaaradka dalka Burma Aung San Suu Kyioo booqasho 17 maalmood ah kuNew York-(HWN)- Hogaamiyaha kooxda mucaaradka dalka Burma Aung San Suu Kyi oo booqasho 17 maalmood ah ku maraysa wadamada dunida kuna bilowday socdaalkeeda dalka Maraykanka ayaa la gudoonsiisay bilad Dahab ah.
Bilad sharafeedka ugu sareysa oo ay bixiyaan koongareyska Maraykanka ee Dahabka ah ayaa la gudoonsiiyay Aung San Suu Kyi oo ah haweeneyda madaxda ka ah kooxda mucaaradka ku ah dowlada Burma.
Biladaan qaaliga ah oo lagu magacaabo Bilada koongareyska ee Dahabka ayaa gacanta laga saaray Aung San Suu
Kyi oo booqasho ahaan ku joogta dalka Maraykanka waana haweeney magac iyo sumcad weyn ku dhax leh aduunka.
Biladaan iminka la gudoonsiinayo mss Aung San Suu Kyi waxaa horay loo gudoonsiin rabay mudo afar sano ka hor iyadoo xabsi ku xiran hayee shee waxaa iminka xaflad ka dhacday Wasaarada maaliyada farta laga saaray Bilada koongareyska ee Dahabka.
Sidoo kale intii ay xaflada socotay waxa halkaasi daboolka looga qaaday in cunaqabateyntii laga qaaday Madaxweynaha dalka Burma oo isna la filayo in todobaadka soo cocdo uu yimaado dalka Maraykanka.